यो प्रायः बोनस हो जुन अनलाइन क्यासिनोहरू पारंपरिक अफलाइन क्यासिनोहरूको तुलनामा खडा हुन्छन्। यस्तो नयाँ बोधहरू आकर्षित गर्न र दुईवटा स्वभावको लागि प्रस्तावित बोनसहरू प्रदान गरिन्छ। सबै भन्दा पहिले, बोनस प्राप्त गरेको तरिका पूर्णतया सीधा छैन, र दोस्रोमा, wagering आवश्यकताको बारेमा एक बिर्सनु हुँदैन। आफ्नो बोनस प्रणाली प्रबन्ध गर्न विभिन्न मेसिनोहरू विभिन्न तवरमा कार्यान्वयन गर्छन्, र, किनभने अधिकांश असहमतिहरूसँग सम्बन्धित छन् बोनस सर्तहरू, यो सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नको लागि सिफारिस गरिएको छ कि शर्त निश्चित गर्न अघि एक निश्चित क्यासिनोमा कसरी बोनस तन्त्र लागू हुन्छ।
हाल, बोनस प्रणालीमा लागू गरिएका थुप्रै परिवर्तनहरू छन् Microgaming, र अनलाइन क्यासिनोहरू प्रायः नयाँ साइन-अप खेलाडीहरूमा नि: शुल्क बजाउने कुनै बोनस बोनस प्रदान गर्न थाले। जब एक खेलाडी एक क्यासिनो संग दर्ता हुन्छ, तिनीहरू केहि मुक्त स्पिनहरू प्राप्त गर्छन् जुन उनीहरूलाई निश्चित निश्चित समय भित्र भित्र पस्छन्। त्यसबाहेक, तिनीहरू प्ले सुरु गर्न क्रेडिट ब्यालेन्स प्राप्त गर्छन्। जब समय बाहिर छ, विजेता खेलाडी हो। यसबाहेक, माइक्रोगिन्मले पनि wagering को लागि Clearplay आवश्यकताहरू प्रयोग गर्न थाले। यसले नकद र बोनस बीचको भेदको लागि अनुमति दिन्छ, जसले क्यासिनोलाई स्वचालित रूपमा बोनसलाई प्लेयरको खातामा स्थानान्तरण गर्दछ र यो प्रक्रियालाई पारदर्शी राख्छ।
क्यासिनोस प्रयोग गरेर क्रिप्टप्टोरेसीले खेलाडीको शुरुआती जम्मामा एक निश्चित प्रतिशतको साइन-अप बोनस प्रदान गर्दछ। सबै अन्य क्यासिनोहरू जस्तै, क्रिटिकल क्यासिनोले आफ्नै सीमालाई जम्मा र बोनसका लागि सेट गर्यो। अनलाइन क्यासिनोहरू बोनस कोडहरू दिन्छन्, र यो आवश्यक छ कि खेलाडीलाई यो कोड परिचय दिनुहोस् र त्यसपछि जम्मा गर्नुहोस्। Wagering को लागि शर्त विभिन्न क्यासिनोहरूमा फरक हुन सक्छ। तिनीहरू केवल बोनसको मात्रामा मात्र लागू हुन्छन् र जम्मा रकमलाई बेवास्ता गर्छन्। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि खेलाडीले बोनसको मद्दतबाट उत्पन्न विजेताहरू मात्र लिन सक्छ तर बोनस आफैलाई मात्र गर्न सक्छ। कैसीनोहरूको लागि wagering आवश्यकता भेट्नका लागि धेरै खेलहरू चयन गर्न यो पनि सामान्य छ।
त्यहाँ धेरै कैसीनोहरू छन् जसले साइन-अप बोनस प्रस्ताव गर्दछ जुन धेरै जम्मा हुन्छ। यस तरिकाले यो खेलाडीलाई लाभ पुऱ्याउँछ जसले ठूलो मात्रामा जम्मा रकम एकै चोटि राख्न नचाहेको छ। यो अझै पनि बोनस कोडमा प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। रियल टाइम गेमिङ प्रणालीको साथ केहि क्यासिनोहरूलाई आवश्यक हुन सक्छ कि डिपोड र बोनस दुवैलाई मनपर्नेछ तर यस अवस्थामा आवश्यक आवश्यकताहरु उच्च हुनेछन। घटनाहरूमा जब यो केवल बोनस हो जसले बिगड गर्न आवश्यक छ, आवश्यकताहरू उच्च हुन्छन्।
वेगास टेक्नोलोजीलाई लागू गर्ने अनलाइन क्यासिनोहरूले पनि साइन-अप बोनसलाई धेरै डिपोमा फैलाउँछन्। फेरि, बोनस को राशि एक विशिष्ट क्यासिनोमा निर्भर गर्दछ। एकै समयमा, सबै क्यासिनोहरूमा भगाई आवश्यकताहरू समान छन्। यो संकेत दिईएको छ कि खेलहरू बजाउने र बोनस बीस पटक दुवै चिन्ह लगाउन आवश्यक छ। बोनसले स्ट्यान्डलोन खातामा हस्तान्तरण गर्यो। पहिलो, खेलाडीले शर्तबाट खाताबाट बोनसका साथ स्थान दिन्छ र त्यसपछि, यदि कुनै पनि ईन्टरनेट हो भने, तिनीहरू नगद खातामा पठाइन्छन्। यस्तो क्यासिनोले बोनस कोडमा प्रवेश गर्न खेलाडीलाई दायरा गर्दैन, र बोनसहरू स्वचालित रूपमा खेलाडीको खातामा हस्तान्तरण गरिन्छ। यदि खेलाडीले बोनस प्रयोग गर्न चाहँदैन भने, उनीहरूलाई जम्मा गरीएको क्यासिनोलाई विशेष गरी यो क्यासिनो लाई सूचित गर्न आवश्यक पर्दछ।
Casino.com प्लेयरले $ 793k खरिद जीतको साथ नयाँ रेकर्ड सेट गर्दछ
तपाईं त्यससँग चिप्स चाहनुहुन्छ?
स्वागत स्वागत बोनस के हो?
विश्वभरको सबैभन्दा ठूलो बेटिङ बजार
हीरा - एक विपणन अभियान चमत्कार
घाइते भएका छन्
तपाईं एक सगाई रिंग मा कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ?
जुवा खेल्न सक्छ नासा स्प्रे द्वारा उपचार हुन सक्छ?
जब यो अनलाइन क्यासिनोको मुनाफा आउँछ, तिनीहरू सामान्यतया घरको किनाराबाट उत्पन्न हुन्छन्, र तार्किक रूपमा, रकमहरू सिर्जना गर्नका लागि तयार पार्दछ। त्यहाँ धेरै देखि कैसीनो को लागि मुश्किल देखि केहि राम्रो छ किनकी धेरै उच्च रोलर खेलाडीहरू, जो सबैभन्दा बढी हुन्छ, यो एकदम आश्चर्यलाग्दो छ कि तिनीहरूमध्ये धेरै सम्भवतः बोर्डमा धेरै रोलर प्लेयरहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्छन्।
अनलाइन क्यासिनो सामान्यतया उनीहरूले उच्च रोलर ग्राहकहरू लक्षित गर्ने स्थिति गर्दैनन्। तथापि, केहि निश्चित संकेतहरू छन् जुन उच्च रोल प्लेयरहरू अनुभव गर्न सक्छन् केहि निश्चित क्यासिनोमा प्ले गर्दा ध्यान दिन सक्छ। त्यस्ता खेलाडी क्यासिनोमा खेल्ने विविध खेलहरू र साथसाथै प्रयोग गरिने सफ्टवेयर बारे धेरै जानकारी पाउँछन्। यसैले, क्यासिनोहरूको लागि यी विवरणहरूको बारेमा उनीहरूका खेलाडीहरूलाई सूचित गर्न आवश्यक छैन। को लागि एक स्पष्ट चिन्ह उच्च रोलर खेलाडीहरू नयाँ क्लाइन्टहरूका लागि म्याच बोनस हो। यस्तो प्रकारका कैसीनोहरू उच्च बजेट प्रदान गर्दछ जसले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिनका लागि बढी मात्रामा जम्मा गर्न र फर्काउन बढी महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्दछ। एकै समयमा, यो उल्लेखनीय छ कि उच्च रोलर खेलाडीहरूको लागि सबैभन्दा ठोस फायदा अनलाइन कैसीनो प्रोग्रामहरू हो जसले वफादारी पुरस्कारहरू प्रदान गर्दछ।
त्यस्ता वफादारी कार्यक्रमहरू कार्यक्रममार्फत, खेलाडीहरू वीआईपी क्लबको विभिन्न स्तरमा नियुक्त गरिएका छन्। ती उच्च तहमा आवंटित व्यक्तिहरूले निम्न तहको खेलाडी भन्दा बढी फाइदा उठाउन सक्छन्। यो स्पष्ट छ कि उच्च रोलर खेलाडीहरूलाई ठूलो फाइदा दिइएको छ, शीर्ष स्तरमा राखिएको छ। महत्त्वपूर्ण फाइदाहरूसँग सम्बन्धित मुख्य तत्व कम्पोटिन्टहरू हुन्। कम्पोटरहरू अनलाइन क्यासिनोद्वारा दिएका छन् जुन खेलाडीहरूसँग सङ्कलन गर्ने अनुपातमा। त्यस पछि, खेलाडीहरूले यी बिन्दुहरूको विनिमयमा नगद प्राप्त गर्न सक्दछन्। उच्च रोलर ग्राहकहरू कम्प बिन्दुहरू प्राप्त गर्न सक्षम छन् र अन्य खेलाडीहरू भन्दा नगद छिटो रकम फिर्ता लिन सक्षम छन्। अन्य फायदाहरूको रूपमा, तिनीहरू बैंकिंग सेक्शनमा हेर्न सकिन्छ: भुक्तानी र उच्च रोलर्स द्वारा बनाईएको रकम तीव्र दरमा प्रशोधन गरिन्छ। यो अनलाइन क्यासिनोमा असामान्य छैन उच्च रोलर खेलाडीहरूको भण्डार र हटाउने प्रतिबन्धहरू मेटाउन। त्यसबाहेक, यो समूहको लागि अधिकतम शर्तको लागि विभिन्न सीमाहरू छन्। केहि क्यासिनोले आफ्नो खातामा आफ्नो हानिको निश्चित प्रतिशत प्रतिफल गरेर उच्च रोलर्सहरू आकर्षित गर्छन्। प्रतिशत फरक हुन्छ तर अक्सर यो5हानिको% मा निश्चित छ।
उच्च रोलर्सहरूले क्यासिनोद्वारा विशेष उपचारको पनि आनन्द लिन्छन्। उदाहरणका लागि, जब तिनीहरू आफ्नो क्यासिनो खातामा लगाउँछन्, क्यासिनोले तिनीहरूलाई स्वागत गर्दछ र स्टाफको सदस्यलाई खेलाडीसँग सम्पर्कमा रहन सँभाल्छ। यो खेलाडीलाई अफलाइन क्यासिनो जस्तै खेल खेल्नको भावना दिनको लागि गरिन्छ। र यो केवल एक सुविधा हो जुन विभिन्न टायरका खेलाडीहरू व्यवहारमा फरक फरक पार्दछ। तिनीहरू टूर्नामेन्टहरूमा उनीहरूको उच्च इनाममा प्रवेशको आनन्द उठाउन सक्छन् जुन तिनीहरूलाई निःशुल्क प्रदान गरिन्छ। अनलाइन क्यासिनोले आफ्नो उच्च रोलर खेलाडीहरुलाई आफ्नो जन्मदिनमा शुभकामना दिन्छन् र उनीहरुलाई एक जनाको रूपमा एक विशेष बोनस प्रदान गर्दछ। यस तरिका, आफ्नो घर छोडेर बिना, उच्च रोलर खेलाडीहरूले प्रायः सबै फाइदा लिन सक्छन् जुन एक खेलाडी पारंपरिक कैसीनो हुन्छ।
टीभी सीरीजका लागि भ्युज 1980 मा सेट गर्नुहोस्
Mayweather / McGregor Fight
आरएनजी प्ले बनाम लाइभ डेलर रोलेट एक्शन
अनलाइन क्यासिनो: Wagering आवश्यकता के हो?
जनवरी 29, 2019 / समाचार
संसारको सबैभन्दा सानो क्यासिनो
संसारमा धेरै भ्रमण गरिएका शहरहरू
मार्च 7, 2019 समाचार
परम्परागत रूपमा, एक अनलाइन क्यासिनोसँग साइन-अप बोनसको आनन्द लिने, खेलाडीले जम्मा गर्न पर्छ। यस आवश्यकता पूरा भएपछि, खेलाडीले तुरुन्तै रकमको बोनस प्रदान गरेको छ। यद्यपि, अनलाइन अनलाइन क्यासिनो भए तापनि लगभग दर्जन डलरको अनावश्यक रकम प्रदान गर्छ, हालका कैसीनोहरू अहिले पर्याप्त साइन-अप बोनसहरू छोड्छन्, बिना ब्याकले प्लेयरलाई खेल सुरु गर्न अनुमति दिन्छ।
यस प्रकारको बोनस प्रायः "खाली स्पिन बोनस" वा "कुनै जम्मा बोनस" को रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट फाइदा लिन, खेलाडीलाई पहिलो क्यासिनो सफ्टवेयर स्थापना गर्न र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ। त्यस पछि, प्रायजसो कैसीनोहरूले $ 500 को बोनसको साथ प्लेयर प्रदान गर्थे जुन एक घण्टाको अवधिमा बिगड गर्न आवश्यक छ। विजयको स्थितिमा, यदि खेलाडीले लगाईएको परिस्थितिको साथ अनुगमन गर्दछ भने वेनिङहरू तिनलाई हटाउन सकिन्छ। हानिको स्थितिमा, यो केवल बोनस हो कि खेलाडीले फर्काउँछ।
यो उल्लेखनीय छ कि प्लेयर आवंटित समय मा न्यूनतम 100 शर्त बनाउन आवश्यक छ। यदि यो गरेन भने, विजेताहरू फिर्ता लिन सकिएन। यद्यपि, यदि 100 शर्तहरू पहिले नै बनाइएका छन् र खेलाडीले winnings पाएको छ भने, उनीसँग समय चल्ने अघि खेल रोक्न र जितिएको रकमलाई रोक्न अधिकार छ। यो कैसीनोहरूमा सामान्य छ माइक्राइमिंग खेलाडी नि: शुल्क स्पिन बोनस को बताइएको छ कि प्लेयरले कम्तीमा $ 20 जित्छ। यस्तो अवस्थामा, खेलाडीलाई $ 20 भन्दा अधिक विजेता राशि को बहाल गर्न अनुमति दिइएको छ।
समय अवस्थाको लागि, यो सख्त छ, र चाँडै बोनस सक्रिय हुन्छ, एक क्यासिनो प्रतीक स्क्रिनमा देखाउँछ र काउन्टडाउन सुरु हुन्छ। विच्छेदनको अवस्थामा, टाइमर चलिरहेको छैन। जब समय सकियो, क्यासिनो आइकन हराउँछ। यदि प्लेयरसँग इन्टरनेटमा खराब जडान छ भने यो प्रकारको बोनससँग प्ले गर्न सिफारिस गरिएको छैन, किनभने त्यो 100 शर्त शर्त पूरा गर्न सम्भव छैन।
यो एक कैसीनो को लागि केवल एक खेल को भित्र निशुल्क प्ले बोनस प्रदान गर्न को लागि साधारण छ। यसको अर्थ सबै शर्तहरू केवल एक खेल प्ले हुँदा राखिनुपर्छ। यो कहिलेकाहीँ एक खेल हुन सक्छ कि कैसीनो अधिक लोकप्रिय बनाउन वा अन्य क्यासिनोहरूमा तयार छ, यो पनि छनौट गर्न विभिन्न गेमहरूको दायरा हुन सक्छ। दुवै अवस्थामा यसको upsides र downsides छ। उल्टो पक्ष यो हो कि यदि खेलाडीसँग खेल सन्तुष्ट छैन भने, उनीसँग उनको फरक फरक छनौट गर्न को लागी संभावना छ, जबकि उल्टो पक्ष यो हो कि स्विचनमा खर्च हुने समय हो। हराएको। यो अक्सर प्रायः अनलाइन स्लॉट खेलहरू छन् जुन त्यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित गरिन्छ - यो नाम बताउँछ, "नि: शुल्क स्पिन बोनस", जो 100 स्पिन बनाउन को लागी आवश्यकता को अनुपालन गर्दछ।
दाँतको स्थिति दुवै सामान्य बोनस र डिपेसन बिनाको लागि समानसँग सही छ। विशिष्ट क्यासिनोमा निर्भर छ, यी नियमहरू परिवर्तन हुन्छन्। यो प्रस्तावित बोनसको बारेमा सबै जानकारी प्राप्त गर्नका लागि क्यासिनोका सर्तहरू र सर्तहरू पढ्न सिफारिस गरिन्छ।
अनलाइन स्लट्सका लागि अर्को के हो?
इतिहासको सबैभन्दा ठूलो संचालक शर्त भेटिन्छ
केआर क्यासिनो जस्तै हुनेछ?
क्यानाडामा पैसा कमाउन उत्तम अनलाइन क्यासिनो के हो?
कम भिन्नता अनलाइन स्लॉटको गोप्य
के मोबाइल फोनको लागि उत्तम मोबाइल उपकरण हो?
पेन्सन के हो?
नामबाट स्पष्ट रूपमा, डिपोभल बोनस प्रयोग गर्न, खेलाडीले पहिला जम्मा छोड्न आवश्यक छ र त्यस पछि उसले रकमको समान बोनस (निश्चित मात्राको रकम सामान्यतया स्थापित हुन्छ) प्रदान गरिनेछ।
यसैले, खेलाडीलाई पहिले नै उनको पक्षमा रकम योगदान गर्न आवश्यक छ। साइन-अप बोनस प्रायः प्रायः एक मानािन्छ। पहिलो जम्मा गर्ने बेलामा खेलाडीले पट्टि गर्न सक्नु अघि समेत कैसीनोबाट बोनसको आनन्द लिन सक्दछन्। यस प्रकारको बोनस एक कैसीनो प्रस्ताव गर्न सक्छन् कि एक भन्दा ठूलो मध्ये एक हो (यो प्रायः धेरै मामलाहरुमा धेरै सैकड़ों डलर सम्म पुग्न सक्छ, तर केही क्यासिनो धेरै हजारौंमा बढ्दै छन्)। यसले प्लेयरलाई एकपटक आफ्नो खेल क्षमता बढाउन अनुमति दिन्छ। त्यहाँ मासिक बोनस प्रस्तावित कैसीनो पनि छन् - यो प्रकारको बोनस भनेको खेलाडिको लागि हो जुन पहिले नै कैसीनोसँग खेलेको छ। प्लेयर द्वारा बनाईएको प्रत्येक जम्मा कैसीनोले मासिक मासिक बोनस को तुलना मा खेलाडी प्रदान गर्दछ।
जब यो जम्मा बिना बोनसको साथ हुन्छ, उनीहरूले स्पष्ट रूपमा प्लेयरबाट कुनै प्रारम्भिक योगदानको आवश्यकता पर्दैन। यस तरिका, खेलाडीलाई निमन्त्रणा दिइएका विभिन्न खेलहरू बिना आफ्नो जेब बाहिर बिना भुक्तानी गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यो ध्यान दिइनेछ कि कुनै रकमको साथ साइन अपमा प्राप्त बोनस को रकम जम्मा बोनस मध्ये एक भन्दा कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ (यो सामान्यतया धेरै दर्जन डलर सम्म सीमित हुन्छ)। यो तथ्यले वर्णन गरेको छ कि खेलाडीले यस चरणमा योगदान गर्न आग्रह गर्दैन। कुनै जम्मा साइन-अप बोनस अनलाईन क्यासिनोहरूमा सामान्य छैन।
यस प्रकारको बोनस धेरै सामान्य हुन्छ
प्लेयरले आफ्नो योगदान दिन्छ पछि मात्र बोनसको आनन्द लिन सकिन्छ
माइक्रोगिमिङ अनलाइन स्लॉट जेकेल र हाइडे
नयाँ टेक्नोलोजीहरूले हाम्रो दैनिक जीवनलाई रूपान्तरण गरेका छन्
तपाईंको ज्याक वा राम्रो भिडियो पोकर टर्मिनलोजीमा ब्रश अप गर्नुहोस्